ညစ်ညမ်းကမ္ဘာကြီးထဲမှာအရာအားလုံးအသည်းအသန်သို့မဟုတ်အလွန်အမင်းအမာခံဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်လိုအပ်သမျှကိုသင်တစ်ဦးထက်ပိုစိတ်အေးလက်အေးလမ်းအတွက်ပျော်မွေ့နိုငျသောရယ်စရာမျက်တောင်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အားအချိန်လေးများအတွက်ကျနော်တို့အခမဲ့ရယ်စရာလိင်ဂိမ်းများစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူလာ။ ဤရွေ့ကားခေါင်းစဉ်ကိုသင်ရယ်မောစေလိမ့်မည်ဟုသူရီစရာဇာတ်ကောင်နှင့်အတူရယ်စရာလိင်ဂိမ်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆောင်ကြဉ်းသွားပေမယ့်လည်းအခြေခံမျိုးကိုသင်တို့ကိုအံ့သြပါလိမ့်မယ်။ နှင့်တစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်းသင်တို့အဘို့ပြုနိုင်သည့်မှတဆင့်နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။, လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင်အမြဲမူရင်းစီးရီးအတွက်ပြုံးစေသူဟာသပြပွဲနှင့်ရီစရာဇာတ်ကောင်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းဒီဆိုက်ပေါ်မှာယုတ်ရုပ်ပြောင်အမျိုးမျိုးကိုတွေ့လိမ့်မည်။ နောက်ပြီးဟာသရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်ပုံကြီးချဲ့ထားတဲ့တချို့စိတ်မျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ ဤဆိုဒ်ပေါ်ရှိဂိမ်းအားလုံးသည်ဂိမ်းအသစ်၏မျိုးဆက်သစ်မှဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်အင်တာနက်ကိုယခုအချိန်တွင်ကမ်းလှမ်းရန်ရှိသည့်အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်အချို့နှင့်လာသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်နှင့်အတူသင်၏ဘရောက်ဇာထဲမှာကစားနိုင်ပြီးသင်ရှိသည်အံ့သောငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်သူတို့ကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။, ကျနော်တို့တောင်မှသင်ဂိမ်းကစားနေစဉ်အဘယ်သူမျှမကိစ္စများပေါ်ထွန်းလိမ့်မည်သေချာအောင်နှစ်ဦးစလုံးအိုင်ကွန်နှင့်အန်းဒရွိုက်ကိရိယာများပေါ်တွင်သူတို့ကိုစမ်းသပ်ပြီး.
ငါတို့သည်လည်းဆိုက်ပေါ်တွင်အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ ဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီကိုအောက်မှာသင်တစ်ဦးမှတ်ချက်အပိုင်းကိုရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မည်ငါတို့သည်လည်းသူတို့အကြောင်းအရာများမဆိုကြင်နာအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဖို့အသုံးပွုနိုငျတဲ့ဖိုရမ်တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားများကိုပေး။ ဤအမှုအလုံးစုံအတွေ့အကြုံကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးပူးတွဲပါမျှကြိုးနှင့်အတူကြွလာ။ ကျနော်တို့အလှူငွေများအတွက်မမေးကြဘူးနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ဒေတာကိုယူသို့မဟုတ်အခြားဆိုဒ်များရန်သင့်အားပြန်ညွှန်းရာမှတဆင့်လမ်းမရှိ။ ဒါဟာဒီမှာအားလုံးတရားမျှတပြီးရယ်စရာညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားပဲ!
ကျနော်တို့ရယ်စရာဖြစ်ကြောင်းရုပ်ပြောင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းကိုအကောင်းဆုံးစုဆောင်းမှုတစ်ခုရှိသည်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူရေကူးကာတွန်းပြပွဲမှဇာတ်ကောင်များပါ ၀ င်ပြီးသင်သိပြီးချစ်ကြောင်းပြသသည်။ ကျနော်တို့မိသားစုကောင်လေး,အမေရိကန်ဖေဖေ,ငန်းသို့မဟုတ်ငန်းနှင့်နံနက်ကဲ့သို့ပြပွဲပြောနေတာပါပဲ။ ငါသည်သင်တို့ကိုရှေ့တော်၌ထိုပြပွဲအပေါ်အခြေခံပြီးရုပ်ပြောင်ဂိမ်းကစားပါတယ်သေချာပါတယ်,ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်သင်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုရလိမ့်မယ်။ ဤပြပွဲအပေါ်အခြေခံပြီးအခြားရုပ်ပြောင်ဂိမ်းအများစုဟာစီးရီးအတွက်အပူဆုံးယင်းကိုအာရုံစိုက်နေကြသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းများသည်သင့်အားအကောင်းဆုံးဇာတ်ကောင်များဖြင့်လိင်စွန့်စားမှုပေးခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။, မိသားစုကောင်လေးဂိမ်းများပေတရု၏ရှုထောင့်ကနေကစားနေကြသည်,ထိုချိုမြိန်ဂိမ်းဟော်ရီနှင့်အတူလာမယ့်နေသည်,သူ၏စကြာဝဠာ၌ရှိသမျှသောဆွဲဆောင်မှုဇာတ်ကောင်နှင့်အတူမော်ရစ်ဆန်၏ရယ်စရာလိင်အတွေ့အကြုံများအောက်ပါအတိုင်း.
ငါတို့သည်လည်းသင်ရယ်မောစေမည်သင်ရောက်စေဖို့သွားကြသည်သောငါတို့ဆိုက်အပေါ်အချို့သောမူရင်းရယ်စရာညစ်ညမ်းဂိမ်းပါရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့သူတို့အတော်လေးမရကြဘူးကြောင်းအမျိုးမျိုးထွက်ကြိုးစားနေမိုက်မိန်းကလေးများနှင့်အတူခမ်လိင်ဂိမ်းအမျိုးမျိုးရှိသည်နှင့်အချို့သောအခြားဂိမ်းထွက်ရှိအကောင်းဆုံးဟာသပညာရှင်များအချို့ကရေးသားခဲ့ကြသည်ကဲ့သို့ထင်ရကြောင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့်စာသားများနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ ဒီဂိမ်းတွေကရယ်စရာကောင်းတာကြောင့်စကားလုံးတွေကိုထည့်ပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဂိမ်းကစားခြင်းကိုစတင်ရန်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်အားဖြင့်ထွက်တွက်ဆပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ စတင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်တို့ဆီသို့ရယ်စရာပုံပေါ်သောဂိမ်းအပေါ်ကစားခလုတ်ကိုထိပါ။, ကျနော်တို့စနစ်တကျထိုသူအပေါင်းတို့ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကျွန်တော်ပင်တစ်ဦးချင်းစီဂိမ်းများအတွက်တိုတောင်းသောဖော်ပြချက်များရေးသားခဲ့သည်။
သငျသညျဂိမ်းရယ်စရာမှတ်ချက်များကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အခြားကစားသမားသင်တို့ရှေ့မှာကျမ်းစာ၌ရေးထားပြီအရာအားလုံးကိုဖတ်ရှုဖို့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကစားသမားတစ်ဦးတက်ကြွအသိုင်းအဝိုင်းရှိသည်,သင်အမှန်တကယ်သူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်ခံစားချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏ဖိုရမ်ထွက်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အခမဲ့နှင့်မျှမမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူဤသူအပေါင်းတို့သည်အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်ကိုဆက်ကပ်။ သင်ဖြစ်နိုင်သမျှအများဆုံးသောနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာအရာအားလုံးကိုပျော်မွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဂိမ်းအသစ်များတင်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းနှင့်ဤနေရာတွင်ရှိရမည်။